Iyure yokungasebenzi kwiChester Gap
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguTravis
Indlu yonke emazantsi eentaba zeShenandoah kunye nentliziyo yelizwe lewayini laseVirginia. Indlu ikufuphi neChester Gap Cellars, ebonelela ngeempelaveki zokungcamla iwayini, ukhenketho, iindlela zokuhamba, kunye nemibono emangalisayo. Ukufikelela kwi-Appalachian Trail ikufuphi kunye ne-Shenandoah National Park, i-Skyline Drive, kunye noMlambo i-Shenandoah. Indlu inemigangatho eyandisiweyo engasemva, indawo yokutyela yangaphandle, kunye nebhafu yabucala eshushu.
Ngeembono ezingqongileyo ezolileyo nezinomtsalane, i-Idle Hour e-Chester Gap yindawo efanelekileyo yokurhoxa kwisiphithiphithi. Ilungele izibini ezithandanayo okanye usapho lonke. Ikhitshi eligcwele ngokupheleleyo ukutya okuphekwe ekhaya kubandakanya igrill yangaphandle kunye nedesika enetafile yokutyela. Idekhi yangasemva ikwabandakanya ibhafu yabucala eshushu. Kukho amagumbi okulala amathathu lilinye lineebhedi zokumkanikazi. IBhafu eyiMaster enebhafu yejethi yeJacuzzi incanyathiselwe kwiGumbi eliPhambili. Amanye amagumbi amabini okulala abelana ngebhafu epheleleyo epasejini. I-sofa ye-queen-size yokukhupha i-sofa iyafumaneka kwi-Ofisi, enokuvalwa ngokufana negumbi lokulala lesine. Okwangoku, indawo yomlilo yangaphakathi ayisebenzi, kodwa kungekudala sinethemba lokuba iya kusebenza.
I-Idle Hour e-Chester Gap yi-5 yeemayile kumazantsi e-Front Royal, eVirginia ukusuka ku-Route 522. Ikufuphi ne-Chester Gap Cellars, intsimi yediliya ekumgangatho ophezulu kunye ne-winery enika amava okungcamla iwayini ngempelaveki kunye neendlela zokuhamba kwipropati. Ukufikelela kwi-Appalachian Trail ikufuphi kunye ne-Shenandoah National Park, i-Skyline Drive, kunye noMlambo i-Shenandoah.